Labo beelood oo dagaal ku dhex marey Gobolka Hiiraan magaalada B/weyne. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Labo beelood oo dagaal ku dhex marey Gobolka Hiiraan magaalada B/weyne.
Labo beelood oo dagaal ku dhex marey Gobolka Hiiraan magaalada B/weyne.
Ilaa dhowr qof ayaa ku dhintay dagaalo u dhexeeya labo beelood kuwaasoo ka dhacay gobolka Hiiraan.
Dhammaan dhowrka qof ee dhintay ayaa ah dadkii dagaalamayay. Dagaalka ayaa u dhexeeya labo beelood oo wada daga gobolkaa oo aano kala tirsanaya isla markaana la sheegay inay dhul isku hayaan sidoo kale.
Dagaaladaa yaa soo socday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay.
Shalay ayaa dagaaladaa aano lala xiriirshay waxaa loo dilay ganacsade caan ka ahaa Baladweyne kaasoo Allaha u naxariistee la oran jiray Bocor Axmed.
Ganacsadaha ayaa la sheegay in lagu dillay galbeedka magaalada Beledweyne meel aan ka fogeyn suuqa weyn ee lagu kala iibsado xoolaha waxaana dilkiisa lala xiriirinayaa aargoosi salka ku haya colaada u dhaxeysa labada beelood oo wadda daga.
Labo maalmood ka hor rag hubeysnaa ayaa toogasho ku dilay macalin dugsi duleedka dhinaca galbeed ee magaalada.
Walow dagaaladaa ay ka dambeeyeen kulamo lagu hishiisiinayay labada dhinac, hadana waxaa wali muuqata in aysan colaadii labada beelood dhamaan.
Ugu danbeyntiina dagaaladan ayaa waxaa loo aaneynayaa in siyaasad qeybi oo xukun ahi ku jirto,waxaagobolka ka jirey in mudo ah muran siyaasadeed oo la xiriira masiirka gobolka iyo taladiisa iyadoo dagaalo qabiil kadibna ay muuqato in la maroorsadey dad gaar ahina u tashadeen halka adkii deegaanku iyagu is dilayaan sharci kala hagaya iyo dawlad u adeegeysana aysan jirin.
Previous articleIsu soobax Roob doon ah oo maanta Caasimada Puntland ee Garoowe ka dhacey.
Next articleGudoomiyihii Gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed eePuntland oo is casiley.